जनयुद्धको बलिदानलाई खेर जान दिदैनौं: धनजित शाही – Karnalisandesh
जनयुद्धको बलिदानलाई खेर जान दिदैनौं: धनजित शाही
प्रकाशित मितिः २९ माघ २०७६, बुधबार २०:४८ February 12, 2020
कालिकोट। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कालिकोटका अध्यक्ष धनजित शाहीले २५औं जनयुद्ध दिवसलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिएका छन्।
बुधबार साँझ सामुदायिक रेडियो नयाँ कर्णाली मार्फत प्रसारण हुने कार्यक्रम ‘जनचासो’ मा बोल्दै अध्यक्ष शाहीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
२५औं जनयुद्ध दिवस कसरी मनाउनु हुँदैछ ? भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष शाहीले भने, ‘कुनै पनि न्यायिक आन्दोलनका क्रममा भएका बलिदानीको खेर जादैन। जे प्राप्त गरेका छौं त्यसलाई उपलब्धी मान्नुपर्छ। बाँकी दिनमा जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने, भ्रष्टचारको अन्त्य, अराजकता र विभेदको अन्त्य गर्ने कुरा, विकृतिको अन्त्य गर्दै शहीदको वलिदान र जनताको योग्दानलाई सम्मान गर्ने
नागरिकमा उत्साह र उभार देखिदैन, केही नेता तथा कार्यकर्ताले अविर लगाउँदैमा सच्चा जनयुद्ध दिवस मान्न सकिन्छ ? भनेर सोधिएको अर्कोे प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘संघर्षको सुरुवात भएको दिन हो। शहीदलाई सम्मान गर्ने र सम्झीने दिन हो। केही सपना बाँकी छन्। केही सपना पुरा हुँदैछन्। केही अभिभारालाई पूरा गर्न फागुन १ लाई निरन्तरता दिनेमा हामीबाट कुनै गुन्जाएस हुँदैन। आज संविधान ल्याएका छौं। गणतन्त्र आयो। राज्य सक्ता जनता र कानूनको हातमा पुगेको अवस्था छ। संघीय गणतन्त्रमा जनताको पहुँच पुगेको छ।’
अध्यक्ष शाहीले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारमा जनताको सहज पहुँच र्सिजना गर्ने कुरामा (नेकपा) इमान्दार र कटिवद्ध भएर लागि रहेको दाबी गरेका छन्।
पार्टी मिलेपनि नेकपाका नेता कार्यकर्ताका मन लिल्न सकेको छैनन भनिन्छ नि ? मन मिल्न नसक्नुका कारण के हुन् ? भनेर कार्यक्रम प्रस्तोता भरतराज विष्टले सोधेको अर्को प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘अभ्यास गर्दै जादा सब मिल्छ। यो राजनीतिक यात्रा हो। दुइ वटा पार्टी एक ठाउँमा आएका छौं। एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने मित्रवत व्यवहार गर्नेमा जोडबलले लाग्ने, मन भाचिएको चाहि होईन।’
शाहीले अगाडि, ‘पार्टी नै फुटमा पुग्ने होईन। भोलिको आकलन के गर्नु ? पक्षधरका आधारमा साथ सहयोग गर्ने कुरा फकर कुरा हो। घनिभुत तरिकाले हामी परिचालन हुन नसकेको चाही हो। थप नमिलेका कुरा मिलाउदै जाउला भोलि फागुन १ लाई उत्सव र विजयको दिनमा रुपमा मनाउन सबैलाई आग्रह गर्दछु।’